Mpanamboatra sy mpamatsy ampahany amin'ny casting casting - China Die Casting Parts Factory
Ny famoahana maty dia fizotran'ny fanariana vy izay miavaka amin'ny alàlan'ny lavaka bobongolo mba hampidirana tsindry ambony amin'ny vy anidina. Ny bobongolo dia mazàna avy amin'ny alika mahery
Teny: Ny ampahany amin'ny famonoana maty Aluminium / ny firaka alimina alimina / ny fitaovana fitsaboana / ny famoahana / ny famoahana / ny famoahana / ny famonoana / ny famonoana
Casting Die Automotive
Nandalo fitantanana kalitao ISO9001-2000 izahay. Orinasa tsy miankina misy famolavolana lehibe sy fanodinana fitaovana hikasika, manokana amin'ny famolavolana, famokarana, famolahana tsindrona ary fametahana.
Mpilalao Die Best
Ny tombony amin'ny casting casting dia misy ny refy marina amin'ny casting. Matetika izany dia miankina amin'ny fitaovana atsipy. Ny sanda mahazatra dia 0,1 mm ho an'ny haben'ny 2.5 cm voalohany ary 0,002 mm isaky ny fiakarana 1 cm.
Fanariana fiara maty / fanariana varahina / firaka alefa / fanariana aluminium / famoahana maty marina / fanariana vy marina
Casting Process tsindry maty casting
Fitaovana firaka aliminioma alimika
Fahasarotan'ny velarana Ra3.2 ~ 0.4μm
Fandeferana refy IT11-IT13
Fepetra fandoavana L / C, T / T
Ny antsipirian'ny fonosana isaky ny takian'ny mpividy
Fotoana fanaterana 30 andro
Ny tombony azo amin'ny rafitra fanariana maty ao amin'ny efitrano mafana dia misy ny fotoana tsingerina haingana (tsingerina 15 isa-minitra), fandidiana mandeha ho azy mora foana, ary ny fahaizana mandrendrika metaly.
Arakaraka ny haben'ny maridrefin'ny crystallization amin'ny firaka, ny haben'ny gradienan'ny mari-pana amin'ny fizarana ny casting, ary ny fizotran'ny casting dia manamafy ny sosona isaky ny sosona, dia mora kokoa ny mandatsaka azy.
Casting faritra Medical
Izahay dia mahay amin'ny Casting CNC sy ireo dingana hafa an'ny CNC ary manana traikefa mihoatra ny 10 taona, noho izany dia tsy mila miahiahy momba ny serivisy ianao.
Fitaovana: Aluminium A380
Fampiharana: Clutch Housing
Fanamarinana kalitao: ISO 9001: 2015
Karazana vokatra: Casting Aluminium Maty
Fombafomba: Fitsaboana fitaovana-Die Casting-Machining Machining-Surface
Fitaovana mekanika maty
Fanaraha-maso kalitao OEM araka ny rafitra kalitao ISO 9001;
Fizarana vidiana mifaninana;
Fast Die cast part Production and delivery;
Vahaolana tokana manomboka amin'ny fananganana fitaovana mankany amin'ny faritra vita;
Fanohanana ny antoka amin'ny fahatokisana.
Die Casting Precision faritra
Miankina amin'ny karazana fanariana maty, ilaina ny milina famonoana efitrano mangatsiaka na ny milina famonoana efitrano mafana. Raha ampitahaina amin'ny teknika fanariana hafa, ny maty maty dia manaloka kokoa ary misy tsy fitoviana lehibe kokoa.
Fitrohana hafanana silila